မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် Institute For Strategy and Policy Myanmar အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ပထမနေ့) ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ~ Myaylatt Daily.
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် Institute For Strategy and Policy Myanmar အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ပထမနေ့) ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် added3new photos.
၁။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နှင့် Institute For Strategy and Policy Myanmar အဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ (၅.၁၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့ နံနက်(၀၉း၀၀)နာရီအချိန်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရုံးခန်းမ၌ “ ပြည်သူ့ရေးရာမူဝါဒနှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”အားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညို၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဌဦးတာ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးဇော်မျိုးဝင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးများ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အပါအ၀င် Institute For Strategy and Policy Myanmar အဖွဲ့မှ အစီအစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်သူငြိမ်း၊ ဒေါ်စုမွန်သဇင်အောင် တို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။
၂။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီးInstitute For Strategy and Policy Myanmar အဖွဲ့မှ အစီအစဉ်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်သူငြိမ်းက “ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်မှုစနစ်”အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဒေါ်စုမွန်သဇင်အောင်က
“ပြည်သူ့ရေးရာ မူဝါဒ“အကြောင်းကိုလည်းကောင်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာကြသူများမှ အပြန်အလှန်မေးခွန်းများမေးမြန်းဖြေကြားခြင်းများဆောင်ရွက်ကာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား (၁၄း၀၀)နာရီတွင် ရပ်နားခဲ့ပါသည်။